Akụkọ - Enwere ọtụtụ ụzọ iji zụlite azụmaahịa
Ningbo ZODI wuo ohuru webusaiti na google igbalite iji gbasawanye usoro azụmahịa.
Site na mmepe nke sayensị na teknụzụ, ọtụtụ teknụzụ ọhụrụ apụtala. Nkuzi netwoki na-ewu ewu kwa n’ihi nsogbu ndi obodo. Maka ịntanetị, n'eziokwu, anaghị m akwado ụdị usoro azụmahịa a. N'ezie, ọ nwekwara uru ya. Ọmụmaatụ, ị nwere ike chọọ ahịa na ndị ahịa nwere ike ịhapụ ozi na-ase, nke mere na ike ikwurịta okwu mfe na ozugbo.
Enwere ọtụtụ ihe achọrọ dị mkpa nke ndị na-ebupụ ahịa ga-enwe afọ ojuju tupu ha ere ngwaahịa ndị ọzọ na mba ofesi nke ịkwalite mmekọrịta azụmahịa na ndị ahịa nwere ike ilebara anya pụrụ iche. Na mkpokọta, ndị na-ebupụ ngwá ahịa nwere ike ịnweta ozi gbasara ndị ahịa nwere atụmanya esenidụt site na ọwa ndị a:
1. Anoghi n'ulo oba na mba asịwo
2. berslọ azụmahịa na mba ọzọ
3. Consulates guzo mba ọzọ
4. associationstù ahia dị iche iche
5. Akwụkwọ ndekọ azụmahịa
6. Akwụkwọ akụkọ na mgbasa ozi
N'inweta aha na adresị nke ndị ahịa a na-atụ anya ya, onye na-ebupụ ya nwere ike ịmalite izipu akwụkwọ ozi, kesaa, katalọgụ na ndepụta ọnụahịa nye ndị otu a metụtara. Akwụkwọ ozi ndị dị otú ahụ kwesịrị ịgwa onye na-agụ ya otú e si enweta aha ya ma nye ya ụfọdụ nkọwa banyere azụmahịa nke onye na-ebupụ ahịa, dị ka ọmụmaatụ, ụdị ngwongwo ndị e mere na ókè ha hà.
Ọtụtụ mgbe, ọ bụ onye na-ebubata ngwa ngwa na-ebuputa ụdị akwụkwọ ozi a ka ọ zigara onye na-ere ahịa ka ọ chọọ maka ozi gbasara ngwaahịa ndị ọ masịrị ya. onye na-agụ ya. Ọ bụrụ na ajụjụ ahụ sitere n'aka ndị ahịa oge niile, azịza doro anya na nke ọma, na ngosipụta nke ekele, bụ ihe niile dị mkpa. Ma ọ bụrụ na ị zaghachi ajụjụ sitere na isi mmalite, ị ga-ahụkarị nke ọma. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịgbakwunye okwu dị mma banyere ngwongwo a jụrụ ma dọrọ uche gaa na ngwaahịa ndị ọzọ nwere ike ịmasị.